I-Digikam 5.3.0 iyatholakala. ukuhlukanisa, ukuhlela nokuhlela izithombe | Kusuka kuLinux
I-Digikam 5.3.0 iyatholakala. ukuhlela, ukuhlela nokuhlela izithombe
Abaningi kumele basebenzise I-Digikam, ebesivele sikhulume ngayo kuyo I-DigiKam: Hlela futhi uhlele izithombe zakho ku-KDE, kulokho osuvele usebenzisa noma uzoqala ukukusebenzisa, siyajabula ukukutshela ukuthi le nguqulo isiyatholakala ukuthi ingalandwa 5.3. kwalokhu okuhle kakhulu umbukeli wesithombe, umhleli nomhleli.
Isici esiyinhloko se- I-Digikam 5.3.0., kungenzeka ukusebenzisa uhlelo ku-Linux usebenzisa Inqwaba ye-AppImage (okuvumela ukuthi kuqhutshwe ngaphandle kwesidingo sokufaka ukuncika okukhethekile, okungukuthi, awudingi ukufaka iDigikam ukuze ukujabulele).
1 Yini iDigikam?
2 Izici ze-Digikam 5.3.0
3 Ungayilanda kanjani iDigikam 5.3.0?
I-Digikam Kuyinto a ithuluzi le-multiplatform, lokho akuvumeli phatha izithombe zedijithali ngokushesha, kalula futhi kalula. Inamandla okuhlela izithombe zethu ngamafolda, izinsuku, amalebula phakathi kwabanye, ngendlela efanayo, isinika ithuba lokuphawula nokukala izithombe zethu.
Ezinye izici ze I-Digikam isihleli sezithombe esilula, esivumela ukuthi senze ukulungisa, ukujikeleza, ukusika, phakathi kwabanye.
Izici ze-Digikam 5.3.0
Ukutholakala kwe-AppImage evumela ukuthi uhlelo lokusebenza lufakwe cishe kunoma yikuphi ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux.
Ukufakwa kwazo zonke izinto ze-digiKam ku-AppImage, kanye nemitapo yolwazi evela eceleni, efana neLensfun, Exiv2 ne-OpenCV.
Kutholakala ngamapulatifomu angama-64-bit no-32-bit.
Ukulungiswa kwamaphutha amaningi abikwe abasebenzisi.
Ukuvuselelwa kwemibhalo yephrojekthi.
Ungayilanda kanjani iDigikam 5.3.0?
I-Digikam iyatholakala ukulanda njengephakheji ye-AppImage ye- Ukusatshalaliswa okungama-64-bit no-32-bit. Ukujabulela uhlobo olusha lwe digiKam 5.3.0, konke okumele ukwenze ukugcina i-AppImage yokwakhiwa kwehardware yakho kufolda yasekhaya, yenze isebenze futhi uyiqhube
Ngaphandle kokungabaza, lesi yisibuyekezo esihle salolu hlelo lokusebenza iningi lethu esilisebenzisela ukuhlela izithombe zethu futhi ikakhulukazi ukuzihlela. Kuyafaneleka ukuphawula intshisekelo yabathuthukisi abaningi be-software yamahhala ekusebenziseni i-AppImage njengethuluzi lokusabalalisa kuzinhlelo zabo zokusebenza.
Futhi ucabangani ngalokhu kubuyekezwa kwe-Digikam?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Digikam 5.3.0 iyatholakala. ukuhlela, ukuhlela nokuhlela izithombe